Ukujonga ngasemva kweMifanekiso emangalisayo ye-IMEX yaseMelika eZinzileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ukujonga ngasemva kweMifanekiso emangalisayo ye-IMEX yaseMelika eZinzileyo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • News Sustainability • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukhenketho oluya kwiMGM ekuchithelwa kuzo iiholide zeMega Solar Array.
Oku kuthatha "ngasemva kwemiboniso" kumanqanaba amatsha! I-MGM Resorts isingathe ukhenketho lwe-IMEX yaseMelika kwi-Mega Solar Array yabo ukuze bajonge ngokusondeleyo kwindawo enika amandla iipropathi zabo zaseLas Vegas.
Olu hambo lwenzeka entlango kwindawo ye-640-acre e-Nevada kwaye yayiyinxalenye ye-Smart Monday kwi-IMEX America.
Apho, abazimasi babenethuba lokubona ukuba uveliswa njani umbane welanga kusetyenziswa iipaneli zelanga ezingama-300,000+.
Olu yayilukhenketho nje olunye lwabaninzi oluveliswe yi-IMEX njengenxalenye yophuhliso lobuchwephesha kunye nenkqubo yomnyhadala woluntu.
Uhambo oluya kwindawo eziihektare ezingama-640 entlango lwaluyinxalenye NgoMvulo olungileyoIxhaswe yiMPI.
Iqela labahambeli be-25 batyelele indawo emangalisayo yendalo ukufumanisa indlela umbane welanga owenziwe ngayo ngeepaneli ze-300,000 +, ukuba usasazwa njani kwigridi yezakhiwo ze-MGM, kunye nendlela ekunceda ngayo ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse kunye nokwenza ukuba kubekho iziganeko ezinobungane bemozulu.
IMEX yaseMelika ngoku iqhubeka kwipropathi yeMGM, eMandalay Bay, ukususela ngoNovemba 9 – 11.
Ukhenketho lwaluyenye yezinto eziveliswe yi-IMEX kunye namaqabane ayo ahlukeneyo njengenxalenye yophuhliso lobuchwephesha kunye nenkqubo yomnyhadala wentlalo ephawula uhlelo lwe-10 lomboniso wezorhwebo okhokelayo kwihlabathi kushishino lweziganeko zoshishino lwehlabathi.